Miyaa Kulanka Barcelona & Napoli Lagu Ciyaari Karaa Camp Nou? Xukuumadda Catalan Oo Ka Jawaabtay. – Laacibnet.net
Miyaa Kulanka Barcelona & Napoli Lagu Ciyaari Karaa Camp Nou? Xukuumadda Catalan Oo Ka Jawaabtay.
July 31, 2020 Abdirashid Mohamud "SHarDinHO"
Ka hor inta uusan bilaaban wareega quarter final-ka koobka horyaalada yurub oo gabi ahaantiisaba ilaa iyo final-ka la go’aansaday in lagu ciyaaro Lisbon, hadana waxaa jira kulamo ka haray wareega 16-aad oo ay tahay in sida ugu haboon loo dhameystiro.
Tiro kulamo yar ah ayaan la ciyaarin lugta labaad wareega 16-ka, waxaana ka mid ah kulanka ay Barcelona la ciyaareyso Napoli, kaas oo u qorsheysan inuu ka dhaco Camp Nou.
Spain waxey gashay wajiga labaad ee xanuunka Coronavirus, dib ayuuna usoo laba kacleeyay maadaama kiisas badan laga diiwaangaliyay magaalooyin ay ku jirto Barcelona.
Sidaas darteed, UEFA waxey walaac ka muujisay in lugta labaad halkaas lagu ciyaari karo, sidoo kale madaxweynaha Napoli wuxuu si cad u sheegay iney tahay wax halis ah iney halkaas ku ciyaaraan.
Wasiirka wasaaradda Caafimaadka Catalonia (Alba Verges) ayaa shaacisay in xaaladda ka jirta wadanka aysan saameyn ku yeelan doonin ciyaarta, iyagoo xasuusan in qof walba oo soo gala Spain xaq loogu leeyahay in la karantiilo muddo 14-maalmood ah.
Si kastaba Wasaaradda Caafimaadka Catalan ayaa xaqiijisay in kulanka uu u dhici karo si nabad ah, isla markaana ay xaalad walba la tacaali karaan.
“Waxey noqon doontaa ciyaar albaabada loo xiri doono, waana u dhameyn karnaa si nabdoon” ayey tiri Alba Verges.
Kaliya waxaa la sugayaa go’aanka ay qaadato UEFA iyadoo dhinaca kale laga talo-galin doono ka hor inta aan go’aanka lagu dhawaaqin, sidoo kalana waxaa jiri doona xaqiijin rasmi ah hadii halkaas si nabdoon loogu ciyaaro karo.
Malaga yaaba in uu baaqdo kulan kani